inakho konke okufunayo i-kuga | Isolezwe
inakho konke okufunayo i-kuga
Isolezwe / 12 July 2012, 12:19pm / NGQESHE BUTHELEZI
IQOQENE yase idla ngamandla iFord Kuga edonsa ngawo wonke amasondo. Ungahamba ngayo emigwaqeni ewubuthebelele yasemadolobheni nasezintabeni iKuga ngoba yakhelwe izimo ezihlukene. Ngaphakathi umumpu kanti nezihlalo zangemuva ziyakwazi ukulaliswa kwande isikhala
IMOTO: FORD KUGA
SEKUYANGICACELA ukuthi kungani kukhona ezinye izinhlobo zezimoto ezintsha ezigcina zifike eThekwini emuva kwesikhathi sekukudala zikhona kwezinye izifundazwe njengase Gauteng naseCape Town. Okunye okuye kubonakale ukuthi ezinye izinkampani zezimoto azinawo amagaraji eThekwini ngoba izinto zakhona zihamba ngonyawo lonwabu. Okwenza lokho ukuthi abantu baseThekwini abekho kakhulu ezimotwenin nezinto eziwubukhazikhazi.
Ngenyanga edlule angizange ngithuke ngesikhathi ngihamba nge-Ford Kuga ngimiswa ngisho nangabantu engibathembayo bengibuza ukuthi inhloboni le moto. Lokhu kungiphoqile ukuthi ngizinike isikhathi ngiyichaze le moto ngoba namanje aziziningi kulesi sifundazwe.
IKuga inenjini eyodwa engu 2.5-litre Duratec Turbo esebenzisa upetrol kanti iphuma ne Intelligence All Wheel Drive.
Le njini ikhiqiza amandla afinyelela ku 147kW kanye ne torque engu 320Nm. IFord Kuga iyi All-wheel Drive (AWD), kodwa kwa Ford bazishaya isifuba ngokuthi abagcinanga nje kuphela ngokwakha imoto ephakeme, kodwa babuye bafaka nesitayela kuyo.
Isikhulu sezokukhangisa kwa Ford uGavin Golightly, uthi le moto yabo ayidlile nje kuphela ngobuhle kodwa iwubuthebelele, ithembekile nasemgwaqeni. Ubuchwepheshe be Intelligent AWD busebenzisa kakhulu amasondo angemuva ukuqhwanda ngaleyo ndlela imoto ikwazi ukonga u-petrol.
Ijubane eliphezulu lale moto lingu 202 km/h, kanti ngebanga elingu 100 km iyakwazi ukusebenzisa u-petrol ongu 10.3 wamalitha. Kumele ngikusho ukuthi iyanamathela emgwaqweni, akubuzwa ukuthi iphuma emndenini wakwa Ford onomlando ngezimoto zejubane
Ziningi izinto ezenza iKuga ihluke kwezinye izimoto ezisesigabeni sayo njengamalambu ayo, indlela okwakhiwe ngayo ibhonethi yayo ongafunga ukuthi yakhelwe khona emotweni, amapayipi amabili angemuva, kanye nengaphakathi eliqoqekile.
Njengezinye izimoto zakwa Ford nayo iKuga ayisalanga ngaphandle ekutheni baqinise kakhulu kwezokuphepha kuyo ngoba bheka nje iphuma nama disc brakes ukuqinisekisa ukuthi uma umshayeli efaka amabhuleki ibamba ngqi.
Okunye abakwengezile kwezokuphepha i-Anti-lock Braking System (ABS) ehambisana ne-Electronic Brakeforce Distribution (EBD), i-Electronic Stability Programme (ESP) ene Anti Rollover Mitigation (ARM) kanye ne Electronic Brake Assist (EBA). abazange nje baqinise kwezokuphepha kuphela, kodwa nobuchwepheshe besimanje njengebhathini lokudumisa ovele ulichofoze nje, kanjalo ne cruise control, iBluetooth.
Njengoba amakhaza eshubisa umnkantsha kulezi zinsuku uwezwa ngendaba kwi Kuga ngoba izihlalo zangaphambili ziyakwazi ukuthi zifudunyezwe ngokucindezela nje inkinobho. Yonke into isebenza ngogesi kule moto.
Ama-wiper akudingi ukuthi uze uwashaye uma liqala ukuna izulu ngoba ayazisebenzela njengoba anama sensa, iphuma ne air conditioning, kanye nama sensa okupaka ngemuva kodwa atholakala kuphela kwiKuga yohlobo lwe-Titanium.
ONGAKUTHOLA NGOKWENGEZA IMALI
Ungakwazi ukuyithola amasondo angu 17 inch ahambisana nerimi lakwa Ford, kanye nokhakhayi oluyi panoramic glass roof etholakala kuphela kwi Titanium.
Iphuma ne warranty yeminyaka emine emuva kuka 120 000 km kanye ne-service plan yeminyaka emine emuva kuka 120 000km. Akugcini lapho kodwa kukhona ne-roadside assistance esiza kakhulu uma wehlelwe inkinga usendleleni
Kuga 2.5 Turbo Trend AWD Auto R375 000
Kuga 2.5 Turbo Titanium AWD Auto R395 000